ထိပ်တန်းတိမ်တိုက်တူးဖော်သည့်နေရာများလား။ အကောင်းဆုံးတိမ်တိုက်သတ္တုတွင်းနေရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ 2022 လမ်းညွှန်
မလွန်ခဲ့သည့်အချိန်များတွင်၊ သင်သည် အထူးကျွမ်းကျင်သူ ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် ဒေါ်လာ ရာဂဏန်းသုံးကာ ကောင်းသော အမြတ်အစွန်းအနည်းငယ်ကို cryptocurrencies တူးဖော်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ယခုအခါ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ပြည့်နှက်နေသဖြင့် ကြည့်ရှုရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သုံးသပ်နေပါသည်။ Bitcoin cloud တူးဖော်ခြင်း။
Bitcoin cloud သတ္တုတွင်းပလက်ဖောင်း
SHAMINING သည် IT နှင့် cryptocurrencies နယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများမှ တီထွင်ထားသည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် cloud တူးဖော်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ပင်မထုတ်ကုန်အယူအဆမှာ ထိရောက်သော ကွဲပြားသော ကွန်ပျူတာသုံး အရင်းအမြစ်များ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်ဝင်လာသူများအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုတည်းတွင် အတူတကွ စုစည်းလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည်မှုသည် ထင်ရှားသော အထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံသည်- ၎င်းတို့သည် နေ့စဉ် ရိုးသားစွာ ၎င်းတို့၏ ၀င်ငွေကို ရရှိပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သတ္တုတွင်းနေရာသည်ကစားသမားအနည်းငယ်သာလွှမ်းမိုးထားပြီးအများစုမှာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးမှတဆင့် ဆက်လက်၍ အကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
'cloud mining' ဟုလူသိများသောမည်သည့် hardware ကိုမဆို ၀ ယ်ယူရန်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးရန်မလိုအပ်ပါ။ ယင်းအစားသင်သည် 'hashing power' ကိုသာဝယ်ယူပြီးအမြတ်အစွန်းအချို့ကိုသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အညီရရှိလိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအရာတစ်ခုခုဟုတ်မဟုတ်စူးစမ်းလိုစိတ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာကိုသေချာဖတ်ပါ အကောင်းဆုံးတိမ်တိုက်သတ္တုတွင်းနေရာများအတွက်အခမဲ့ 2022 လမ်းညွှန်.
မှတ်စု: Cloud mining သည် စည်းကမ်းမဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် သင့်ပိုက်ဆံကို ခိုးယူရန်မှလွဲ၍ အခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိသော fly-by platform များ အများအပြားရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီ အလွန်သတိထား၍ နင်းပါ။
Cloud တူးဖော်ခြင်းသည် Bitcoin နှင့်တူသော cryptocurrencies တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည် Ethereum မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုဝယ်ယူရန်မလိုဘဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် DIY အခြေခံဖြင့် cryptocurrencies ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ရန်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများသည်ထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအခြေခံ blockchain သည်အခက်အခဲပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှအသစ်ဝယ်ယူထားသော hardware device များကိုမကြာမီပင်ပိုမိုစွမ်းအားမြင့်သော device များဖြင့်အစားထိုးရန်လိုအပ်သည် - ထို့နောက်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမလိုအပ်သောပမာဏဖြစ်လာသည်။
ထို့နောက် သင်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲကို လည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။ အမြတ်ထွက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကို ရပ်တည်ဖို့ တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီ လည်ပတ်နေဖို့ လိုတာကြောင့် အနည်းဆုံးပါပဲ။ ထို့ကြောင့်၊ အားကောင်းသောသတ္တုတူးဖော်ရေးကိရိယာများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ညစ်ညမ်းသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် သင်၏ရေရှည် ROI တွင်စားမည့် နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ Bitcoin cloud တူးဖော်ခြင်းတွင် ပါဝင်လာပါသည်။
မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုမဆို ၀ ယ်ယူခြင်း (သို့) မည်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမျှသုံးစွဲစရာမလိုဘဲ Bitcoin cloud mining သည်သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်မှသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးနေရာကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ရန်ပုံငွေများကိုအောင်မြင်စွာသတ္တုတွင်းတူးဖော်ရန်အတွက်လိုအပ်သောမူဘောင်ရှိပြီးဖြစ်သောအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်သောသတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးအကျိုးအမြတ်ကိုသင်ရရှိသည့်ပမာဏနှင့်ညီမျှသည်။ Bitcoin cloud mining platform များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်သောကြောင့်သင်၏ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အရေးရလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပေါင်းစပ်အကျိုးစီးပွား၏အကျိုးရလဒ်များမှသင်အကျိုးခံစားရနိုင်သည်။
သို့ရာတွင် Bitcoin cloud သတ္တုတွင်းနေရာသည် Wild West ကဲ့သို့မကြာခဏလည်ပတ်ကြောင်းအလေးပေးရန်အရေးကြီးသည်။ တည်ရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းများစွာရှိနေသော်လည်းများစွာသောသူတို့သည်တော့မဟုတ်ပါ။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်နေ့ချင်းညချင်းပျောက်ကွယ်သွားသည့်မရေမတွက်နိုင်သည့်တိမ်တိုက်များတူးဖော်ခြင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ၎င်းတို့နှင့်အတူလမ်းတစ်လျှောက်လျှောက်လှမ်းနေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနေဖြင့်သင်အလွန်သတိကြီးစွာဖြင့်နင်းနင်းရန်လိုအပ်သည်။
Cloud Mining ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကားအဘယ်နည်း။
မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုမှမလိုအပ်ဘဲမိုင်း cryptocurrencies ။
သင်ဆန္ဒရှိသလောက် အနည်းငယ် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ။
သင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၏ ရလဒ်ကို တစ်ရက်မှ စတင်ကြည့်ပါ။
သင် cloud mine လုပ်လိုသော cryptocurrency ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အချိုးကျသော သတ္တုတွင်းမှ အမြတ်ဝေစုကို ရယူပါ။
အလားအလာ အမြတ်များသည် အလွန်နည်းသည်။
Cloud Mining Platforms ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Cloud Mining Platform သို့မ ၀ င်ခင်သင့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။
မှတ်စု: အောက်တွင်ပေးထားသော cloud mining ဥပမာများတွင်၊ ရိုးရှင်းသောနံပါတ်များနှင့် တွက်ချက်မှုများကို အသုံးပြုနေပါသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို သင်နားလည်ကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။.
🥇အဆင့် ၁: Cloud Mining Site တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုမှာသင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့် Bitcoin cloud mining site ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုသင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကွန်ရက်စာမျက်နှာအားမည်မျှကြာအောင်လည်ပတ်နေပြီနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်အများပြည်သူဒိုမိန်းနှင့်တူသည်စသည့် platform ပေါ်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသုတေသနပြုမှုကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင် Bitcoin cloud mining site တွင် သင် သတိထားရမည့်အချက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစာမျက်နှာ၏အဆုံးအထိ 2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး cloud တူးဖော်ရေးဆိုဒ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုများကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
🥇အဆင့် ၂ - ငွေစာရင်းနှင့်အပ်ငွေရန်ပုံငွေများဖွင့်ပါ
သင်အသုံးပြုလိုသော cloud mining platform တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင် သင်သည် အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခု ပေးဆောင်ရန်နှင့် အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို ရွေးချယ်ရန်သာ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ cloud mining site များသည် fiat ငွေကြေးများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသောကြောင့် - ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် တောင်းဆိုရန် မလိုအပ်ပါ။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အချို့သောရန်ပုံငွေများကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ Cloud သတ္တုတွင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်ရန် cryptocurrencies အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအိတ်မှရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဆိုပါကဤဖြစ်စဉ်သည် third-party cryptocurrency လဲလှယ်ရေးနှင့်အတူတူပင်လည်ပတ်သည်။
cloud mining site တွင် သင်အပ်နှံလိုသော cryptocurrency ကိုနှိပ်ပါ။
ထူးခြားသော ငွေသွင်းပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကို သင့်ကလစ်ဘုတ်သို့ ကူးယူပါ။
သင်အပ်နှံလိုသောပမာဏကိုဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ရန်ပုံငွေများကို လွှဲပြောင်းပါ။
သင်၏ cloud mining site ကို 10-20 မိနစ်အတွင်း စာရင်းသွင်းရပါမည်။
🥇အဆင့် ၃: သတ္တုတွင်းသို့ Cryptocurrency ကိုရွေးချယ်ပါ
သင်အသုံးပြုလိုသော Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်များသောအားဖြင့်သင့်အားကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများပါ ၀ င်သောမတူညီသော cryptocurrencies ကိုတူးဖော်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးလေ့ရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် Bitcoin ကိုတူးဖော်ခြင်းသည်စျေးကွက်ရှိအခြား cryptocurrencies များထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုကိုပေးနိုင်သော်လည်းလူကြိုက်များမှုနည်းသော alt-coin ကိုတူးဖော်ခြင်းသည်အလားအလာကောင်းသည်။
မှတ်စု: မည်သည့် cryptocurrency ကို တူးဖော်မည်ကို မရွေးချယ်မီ သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ- ဥပမာ- အနည်းဆုံး hash နှုန်း၊ စာချုပ်၏ အရွယ်အစားနှင့် ခန့်မှန်းထားသော အထွက်နှုန်းများ။ ဤအရာကို နောက်မှ အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။.
သငျသညျသတ္တုတွင်း cloud ချင်ပါတယ်တဲ့ cryptocurrency ကိုတွေ့ပြီးတာနဲ့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မည်မျှဆန္ဒရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေမှသင်ရရှိသောရန်ပုံငွေများကိုရရှိပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးလိမ့်မည်။
🥇အဆင့် ၄: ကန်ထရိုက်ရသည့်အချိန်အထိသင်၏ဝေစုကိုလက်ခံရရှိပါ
အမှုအခင်းအများစုတွင်၊ အနည်းဆုံးကာလတစ်ခုအတွက် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ 'စာချုပ်ကာလ' ဟုလူသိများသည်၊ ၎င်းသည် သင်၏ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် သော့ခတ်ထားရန် လိုအပ်မည့်အချိန်ကို ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းသည် သက်တမ်းတစ်လျှောက် သင်၏အတိုးပေးချေမှုများနှင့် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့တွင် သင်၏မူလအပ်ငွေပမာဏကို လက်ခံရရှိမည့်အတောအတွင်း ပုံသေအတိုးနှုန်းစာချုပ်များနှင့် ဆင်တူသည့်သဘောအတိုင်း လုပ်ဆောင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူတိမ်တိုက်သတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်အများစုသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်များမှသင်၏ဝေစုကိုနေ့စဉ် အခြေခံ၍ ဖြန့်ဝေပေးလိမ့်မည်။ ကန်ထရိုက်ရင့်ကျက်သည်အထိ၎င်းသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ငွေပြန်အမ်းလျှင်သင်အဓိကကျသောငွေပမာဏကိုပြန်အပြည့်အဝလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ ၁ BTC Bitcoin cloud တူးဖော်ရေးစာချုပ်သို့။
cloud mining ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် တစ်ရက်လျှင် 0.0001 BTC ပေးသည်။
သင်သည် တစ်နှစ်တာအတွက် 0.0001 BTC ကို နေ့စဉ် ရရှိသည်။
တစ်နှစ်တာကာလပြီးဆုံးသည်နှင့်၊ သင်သည်သင်၏ 1 BTC ကိုပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုကိုအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုသို့ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကြံပြုလိုသည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်းအတိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသင်ခံစားခွင့်ရလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် 'အတိုးအပေါ်' အတိုး 'ရရှိပြီးသင်၏ငွေကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးပွားစေသည်။
သတ္တုတွင်းဘယ် Cryptocurrency ရွေးချယ်ခြင်း
ဒါကြောင့်ယခုသင်တိမ်တိုက်သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိပြီဆိုလျှင်သင်သတ္တုတွင်းလုပ်ချင်သော cryptocurrency ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သတ္တုတွင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြွေစေ့တစ်ခုတည်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်အဖြေမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။ အဲဒီအစား, သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည် variable တွေကို၏အမှိုက်ပုံရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ၊ ပွင့်လင်းသောစျေးကွက်တွင် cryptocrency မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကြွေစေ့သည်ရက်သတ္တပတ်များစွာသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာအထက်သို့သွားနေလျှင်၎င်းသည်ခုန်ချသင့်သည်။
အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ မင်းဟာ Cloud လုပ်တဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနေ့စဉ်အခြေခံပြီးရလိမ့်မယ်၊ မင်းကမင်းတို့လုပ်နေတဲ့ cryptocurrency မှာပေးရလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ငွေစက္ကူ၏တကယ့်တန်ဖိုးသည်သင်၏ ROI တစ်ခုလုံးအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလျှင် ရေရှည် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်း၊ အနာဂတ်တွင် တန်ဖိုးတိုးလာရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဟု သင်ထင်သည့် cryptocurrency ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ သင်သည် အကြွေစေ့များကို နှစ်အတော်ကြာအောင် ရောင်းချခြင်း၏အမြင်ဖြင့် သင်၏ cloud တူးဖော်ခြင်းမှ အမြတ်အစွန်းများကို ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသင်ရွေးချယ်ထားသော cryptocurrency ၏အလားအလာကိုယုံကြည်စိတ်ချပါကသင်သည်ကြေးနန်းတိမ်တိုက်မှတစ်ဆင့်လျှော့စျေးဖြင့်ဒင်္ဂါးများကိုရယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၏ကန ဦး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Bitcoin၎င်းသည်အခြေခံ CPU စက်ပစ္စည်းဖြင့်သတ္တုတူးဖော်ရေးဆုများရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သတ္တုတွင်းများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးခြင်းကြောင့်လူတိုင်းသည်ထိုအရေးကြီးသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆုကိုရရှိရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းများရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ Bitcoin သည်ယခုအခါပေါင်ဘီလျံပေါင်းများစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်အတန်းဖြစ်သောကြောင့်သတ္တုတွင်းနေရာများတွင်ကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်များတူးဖော်သောနေရာများကလွှမ်းမိုးထားသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းပါးသောသတ္တုတွင်းနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်သော cryptocurrency ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနှင့်သက်ဆိုင်ရာအကြွေစေ့တန်ဖိုးနည်းလေ၊ သင်၏မိုcloud်းတိမ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း၌အခွင့်အလမ်းပိုများလေဖြစ်သည် တသမတ်တည်း ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆုလာဘ်အနိုင်ရ။
✔️ Projected ngahasilkeun
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်အများစုသည်သင်ရွေးချယ်ထားသည့် cryptocurrency ပေါ်တွင်ပေးချေမှုကိုပြိုကွဲစေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုတခါတရံတွင် KW / s သို့မဟုတ် MH / s တိုင်းအတွက်ဒေါ်လာပမာဏအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ သို့သော်၊ ဤအချက်သည်သင်မည်မျှရနိုင်မည်ကိုအတိအကျသိရန်ခက်ခဲစေသည်၊ ထို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်းကိုရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ဖော်ပြသောဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုနှစ်သက်သည်။
သတိပြုပါ၊ စျေးကွက်အခြေအနေများနေ့စဉ်နီးပါးပြောင်းလဲနေသောကြောင့် Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှထုတ်ဝေသောစီမံထားသောအထွက်နှုန်းကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်အာမခံချက်မျှမရှိနိုင်ပါ။
Cloud Mining Site တစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
Cloud ရှာခြင်းမှအမြတ်ထုတ်ရန်သင်၏ရှာပုံတော်တွင်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုမည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်မှုလုပ်ငန်းဟာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိတဲ့နည်းနဲ့လည်ပတ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ငွေဘယ်တော့မှ ၁၀၀% လုံခြုံမှုမရှိဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီအသစ်သို့မ ၀ င်ခင်သင်သတိထားရမည့်အဓိကအချက်များအချို့ကိုစာရင်းပြုစုထားသည်။
မှတ်စု: သင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအချိန်မရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်း cloud mining platform မှ နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုများကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုထိန်းညှိထားခြင်းမရှိသော်လည်းသင်၌အများသုံးဒိုမိန်းတွင်သင်ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ Cloud သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စတင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ကြာကြာလည်ပတ်နိုင်လေလေ။
ထို့နောက် Reddit ကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကို လေ့လာ၍ Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးပံ့ပိုးပေးသူနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူ၏အမြင်ကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ အကယ်၍ ယခင် site ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှတသမတ်တည်းတိုင်ကြားမှုများရှိပါကသင်ရှောင်ရှားသင့်သည်။
သင်၏ cloud mining account နှင့်ရန်ပုံငွေလိုချင်သော cryptocurrency အမျိုးအစားကိုလည်းသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ပလက်ဖောင်းသည်သင်လက်ရှိကိုင်ထားသောအကြွေစေ့တစ်ခုကိုမထောက်ပံ့ပါက၎င်းကိုသင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
ငွေလဲခကို သင်ထည့်သွင်းသောအခါတွင် ၎င်းသည် သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးလာစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီ မည်သည့်ဒင်္ဂါးပြားများကို ပံ့ပိုးပေးသည်ကို အကဲဖြတ်ပါ။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆုများကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ရနိုင်သောပြည့်စုံသောသတ္တုတွင်းတူးစင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သင်ငွေရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းကိုပိုင်ဆိုင်သောဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမိုင်းလုပ်သားများသည် blockchain အခက်အခဲအဆင့်တိုးမြှင့်သည့်အခါနှင့် hardware ပစ္စည်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီး၎င်းသည်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏မိုdecision်းတိမ်တူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်း၏တည်နေရာသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်စွမ်းအင်စျေးနှုန်းချိုသာသောတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်အခြေစိုက်သည့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ချင်သည်။ အမြဲတမ်းကြီးထွားနေသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကြောင့်သင်၏အထွက်နှုန်းကိုမစားမိစေရန်ဖြစ်သည်။
အလားတူစွာသင် crypto-friendly တည်နေရာပေါ်တွင်အခြေခံသည်သောမိုbased်းတိမ်တူးဖော်ရေး site ကိုရွေးချယ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့မပြုလုပ်ပါကဒေသခံအာဏာပိုင်များကဤစစ်ဆင်ရေးကိုပိတ်ပစ်ရန်အစဉ်အမြဲရှိသည်။
သင်၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုအနည်းဆုံးစာချုပ်ကိုအကဲဖြတ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာမိုcloud်းတိမ်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအားတစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်ပါက၎င်းသည်နှစ်ကုန်သည့်အထိသင်၏အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ပေးဆပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကာလတိုငွေသားစီးဆင်းမှုအကျပ်အတည်းကိုကြုံတွေ့ရပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုငွေထုတ်ချေးရန်လိုအပ်ပါကပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။
တိမ်တိုက်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများသည် ၀ င်ငွေရှာသောလုပ်ငန်း၌ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနေဖြင့်သင်သည်အခြေခံကျသောအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ သင်သည်သုံးစွဲသောလျှပ်စစ်ပမာဏအပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲသောအခကြေးငွေကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်၊ Cloud သတ္တုတူးဖော်သည့်နေရာသည်သင်ရရှိသောငွေပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ 10 BTC သတ္တုတူးဖော်ရေးဆု၏ 0.0001% ယူလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် Cloud Mining Platform သည် block ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ခုလုံးကိုဝေခွဲမရဆိုတာကိုသင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည် နှင့် အရောင်းအ ၀ ယ်အခကြေးငွေများသို့မဟုတ်ဆုကြေးငွေကိုပိတ်ဆို့ပါ။ များစွာသောကိစ္စများတွင်၊ ပလပ်ဖောင်းများသည် ဘလောက်ဆုလာဘ်ကိုရရှိခဲ့သောအခါ ၎င်းတို့စုဆောင်းထားသော ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ထပ်ဆောင်းအထွက်နှုန်းကို လွဲချော်နေပါသည်။
Cloud Mining Site အသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များ
မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်မဆိုကဲ့သို့ပင်သင့်အနေဖြင့်နောက်ခံအန္တရာယ်များကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် cryptocurrencies သည်အလွန်မှန်းဆသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်လည်ပတ်နေသဖြင့်သင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအမြဲရှိသည်။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအသစ်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း client ရန်ပုံငွေဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားသောလိမ်လည်လှည့်ဖြားသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်နမူနာများစွာရှိခဲ့သည်။
ပလက်ဖောင်းသည်အစကန ဦး တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်ခဲ့ကောင်းပြုသော်လည်း၊ တိမ်တိုက်တူးဖော်သည့်နေရာသည်နေ့ချင်းညချင်းရပ်တန့်သွားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည့်ကိစ္စများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ဤအရာသည် သင့်အတွက်မဖြစ်စေရန် အာမခံချက်မရှိပါ။ အနည်းဆုံးတော့ cryptocurrencies ၏ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမဲ့ နှင့် နယ်နိမိတ်မရှိသော သဘောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်သည် cryptocurrencies ကို တူးဖော်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် သင်၏အမြတ်ငွေများကို cryptocurrencies ဖြင့်ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ပေါင်နှင့် pence မှအမြတ်များကိုနားလည်ရန်အလို့ငှာ၊ သင်သည်သင်၏ဒင်္ဂါးပြားများကိုပွင့်လင်းသောစျေးကွက်တွင်ရောင်းချရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
သို့သော်၊ cryptocurrency စျေးကွက်များသည် bearishness ကာလကိုဖြတ်သန်းသွားပါကသင်၏ဒင်္ဂါးများကိုလျှော့စျေးဖြင့်လျှော့ချရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တိမ်တိုက်တူးဖော်ခြင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမလိုအပ်ဘဲဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ကိစ္စရပ်များတွင်၊ သက်ဆိုင်ရာ cryptocurrency စီမံကိန်းသည်လုံးလုံးပြိုလဲသွားပါကသင်၏ cloud mining အမြတ်အစွန်းသည်တန်ဖိုးမရှိနိုင်ပါ။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် cryptocurrency တစ်ခုကိုတူးဖော်ခြင်းတွင်ကြိုတင်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အဓိကသတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်စျေးကွက်ရှိအရာအားလုံးထက် ပို၍ စွမ်းအားပိုမိုထုတ်ယူနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသော hardware ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ပါက Cloud Mining site သည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။
အကောင်းဆုံး Cloud Cloud Minites Sites 2022
Cloud Mining site အသစ်မတိုင်မီသင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသော်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးခြယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။ အရေးကြီးသည်မှာစင်မြင့်တစ်ခုသည်သင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်မှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်သင်အန္တရာယ်များကိုသင်နားလည်ကြောင်းသေချာစေပါ။
Bitcoin တူးဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအစမှအဆုံးထိဖတ်ပြီးပါကယခုအာကာသမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကောင်းစွာနားလည်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤတွင် Cloud Mining site တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များနှင့်မည်သည့် Cryptocurrency ကိုသတ္တုတွင်းတန်ဖိုးတွက်ချက်မှုတို့ပါဝင်သင့်သည်တို့ပါဝင်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့၊ သင်ဟာ Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့စွန့်စားရမှုများစွာကိုသတိထားမိသည်။
ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်တိမ်တိုက်တူးဖော်ခြင်းသည်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရှိသော်လည်း၊ မည်သည့်စျေးကြီးသော hardware ပစ္စည်းကိုမဆို ၀ ယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ သင်မည်သည့်အကြွေစေ့ကိုကြိုက်လိုသည်၊ သင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်၊ ထိုပမာဏသည်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်သာဖြစ်သည်။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းတော်တော်များများသည်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခကြေးငွေပေးစရာမလိုဘဲကမ်းလှမ်းသည်ဟုဆိုသော်လည်းတရား ၀ င်လည်ပတ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပလက်ဖောင်းဟာတိမ်တိုက်တွေတူးဖော်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေကိုအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်မယ့်တွင်းတူးစင်ထဲကိုဘာကြောင့်ဖြတ်သန်းသွားမှာပါလဲ။ ပြီးတော့အဲဒီ့တူးဖော်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ပေးရမှာလား။
တိမ်တိုက်တူးဖော်သည့်နေရာသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိ / မရှိမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
တိမ်တိုက်သတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောနည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်မည်သူနှင့်မှတ်ပုံတင်သည်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာပလက်ဖောင်းမည်မျှကြာအောင်လည်ပတ်နေသည်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်အတိတ်နှင့်လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှအများပြည်သူပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် မည်သည့် hardware ကိုမျှ ဝယ်ယူရန် မလိုအပ်ပါ။ ဒါမှ ကြိုက်သလောက် နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရတယ်။ သို့သော်လည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ပံ့ပိုးသူမှ ကွဲပြားမည့် cloud တူးဖော်ရေးဆိုက်ကို အသုံးပြုရန် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရပါမည်။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းများမှအနည်းဆုံးစာချုပ်သက်တမ်းသည် site-to-site တစ်ခုနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ အချို့သည်အနည်းဆုံး ၆ လသက်တမ်းရှိသော်လည်းအချို့မှာမူပိုမိုကြာရှည်သည်။
ဤသည်မှာစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အကောင်းဆုံးမိုmining်းတိမ်တူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အကျိုးအမြတ်မဖြစ်ထွန်းပါကစာချုပ်တစ်ခုမှထွက်ခွာရန်ခွင့်ပြုသည့်ရပ်စဲရေးဝါကျကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
Cloud သတ္တုတူးဖော်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သော hardware ပေါ် မူတည်၍ cryptocurrencies ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ cryptocurrencies မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် hashing algorithm တွေမကြာခဏဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့် platforms တွေကအထူးပစ္စည်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ရွေးချယ်စရာများ Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin နှင့်အခြားပါဝင်သည်။
တိမ်တိုက်တူးဖော်သည့်နေရာများသည်များသောအားဖြင့်နေ့စဉ်အကျိုးအမြတ်များကိုဖြန့်ဝေသည်။ များသောအားဖြင့်သင်သည်တိမ်တိုက်တူးဖော်သည့်ငွေကြေးနှင့်တူသည်။ ဥပမာ Ethereum ကိုမင်းလုပ်နေမယ်ဆိုရင် ETH မှာမင်းရဲ့နေ့စဉ်အကျိုးအမြတ်ကိုရလိမ့်မယ်။